Jabhadda oo soo rogaal celisay iyo dagaal ka socda Tigray | KEYDMEDIA ENGLISH
Jabhadda oo soo rogaal celisay iyo dagaal ka socda Tigray
Dagaal culus ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka dhacayay gobolka, iyadoo ay barbar socdaan duqeymo diyaaradeed.
MEKELLE, Itoobiya - Dagaal ayaa dib uga qarxay gobolka Tigray, kaasoo ay kusoo qaadey Jabhadda TPLF ee laga saarey gobolka sanadkii tagey kadib duulaankii Ciidamada Federaalka Itoobiya.
Malleeshiyaadka TPLF ayaa dagaal kula wareegtay maalin kahor dhowr degaan iyo degmada Adigrat, oo qiyaastii 45-KM u jirta xadka dalka Eritrea, iyadoo xaaladda ay wali kacdsan tahay oo Ciidanka dowladda wadaan dhaq-dhaqaaqyo.
Afhayeen u hadlay TPLF oo lagu magacaabo Gebre GebreTsadiq ayaa seegay in dagaal xoogan ay la galeen Ciidamada ay u suurtagashay inay gacanta ku dhigaan dhul ballaaran, isagoo wacad ku maray inay sii wadi doonaan halgankooda illaa ay kala wareegayaan Caasimadda Tigray ee Mekelle.
Dagaalkan ayaa kusoo aadaya ayaa Itoobiya ay ka socoto tirinta codadka doorashadii Isniintii ka dhacday qeybo kamid ah dalka, taasoo shacabka ay kusoo dooranayaan Baarlamaanka cusub iyo gudoomiyeyaasha gobollada.
Doorashadda kama dhicin Tigray iyo dowlad degaanka Soomaalida, sababo amni, waxaana dib loo dhigay illaa dhamaadka sanadkan, waxaana Abiy Axmed uu sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay inay xasiliso dalka.
TPLF oo 30 sano xukunka Itoobiya haysatay ayaa laga fara-maroojiyay gobolka Tigray kadib dagaal lix bilood qaatay, oo Abiy Axmed amarkiisa bixiyay, wuxuuna ka dambeeyay kadib markii Jahbadda ay weerartay taliska waqooyi ee Ciidanka.
QM ayaa sheegtay in 350,000 oo qof ay ku wajahayaan macluul gobolka Tigray, kuwaasoo gargaarka bini'aadanimo ee loogu tala-galay aan la gaarsiin karin kadib markii Ciidamada Eritrea iyo kuwa Itoobiya is-hortaag ku sameeyeen.
Kumanaan ayaa ku dhintay colaadda Tigray, iyadoo malaayiin ay ku bakaraceen, waxaana hay'adaha xaquuqul insaanka iyo QM ay sheegeen in xad-gudubyo iyo xasuuq ay ka dhaceen gobolka intoo dagaalka socday.
Talaadadii, diyaaradaha dagaalka Itoobiya ayaa duqeeyay Suuq ku yaalla Mekelle meel u dhaw waxaana lagu dilay ugu yaraan 30 qof oo shacab ahaa, sida ay sheegeen Saraakiisha Caasimaadka gobolka.
Comments Topics: abiy axmed tigray